Kuyini Ukuhlaziywa Kweqembu leGoogle Analytics? Umhlahlandlela Wakho Oningiliziwe | Martech Zone
ULwesibili, May 5, 2015 UMsombuluko, May 4, 2015 Shane Barker
I-Google Analytics muva nje ifake isici esihle kakhulu sokuhlaziya umphumela obambezelekile wezivakashi zakho owaziwa njengokuhlaziywa kweqoqo, okuyinguqulo ye-beta yosuku lokutholwa kuphela. Ngaphambi kwalokhu kufakwa okusha, abaphathi bewebhu nabahlaziyi be-inthanethi bebengeke bakwazi ukubheka impendulo ebambezelekile yezivakashi zewebhusayithi yabo. Kwakunzima kakhulu ukuthola ukuthi izivakashi ze-X zivakashele isiza sakho ngoMsombuluko nokuthi zingaki zazo ezivakashele ngosuku olulandelayo noma ngosuku olulandelayo. Okusha kweGoogle ukuhlaziywa kweqembu isici sizokusiza uthole futhi uhlaziye le datha ukukhulisa ukuzibandakanya kwewebhusayithi yakho.
Yini i- “Cohort”?
Iqoqo yigama elisetshenziselwa ukuchaza iqembu labantu abahlangane ndawonye ngenxa yemfanelo efanayo. I-Google isebenzise igama elithi “iqembu” ukuchaza umphumela obambezelekile ku- analytics futhi wakhe olunye uhlobo lwesigaba esivivinywe isikhathi sokuhlaziya ukusebenza komsebenzisi. Ngaphambi kokuthi isici sihlanganiswe ku-Google Analytics, kwakunzima kakhulu ukuhlaziya amaqoqo ngokuthola usuku, kepha manje lokhu kungavunyelwa ukusetshenziswa okuguquguqukayo kwesiko nemicimbi.
Ungakusebenzisa Kanjani Ukuhlaziywa Kweqoqo
Ungafinyelela kalula kusici sokuhlaziya ngaphansi kwesigaba sezethameli esivezwe kubha yakho eseceleni yangakwesobunxele kuGoogle Analytics. Uma uqhafaza, uzobona igrafu elandelwa itafula. Ngenkathi itafula kungaba nzima ukuliqonda ekuqaleni, ungakhathazeki ngoba ngizokwenza kube lula ukuliqonda. Igrafu ezenzakalelayo imelela isilinganiso sokugcinwa esijwayelekile (%) sezivakashi zakho ezihlukile kulezi zinsuku eziyisikhombisa, 14, 21, noma ezingama-30 ezedlule.
Etafuleni elingezansi, uzobona ukuthi ngo-Ephreli 1, 2015 (umugqa wesithathu), abasebenzisi abayingqayizivele abangu-174 bavakashele iwebhusayithi, ezosetshenziselwa ukumela usuku 0. Manje, bheka usuku 1 kukholamu yesithathu ukubona ukuthi bangaki kwezivakashi eziyi-174 zavakashela le webhusayithi kamuva. Ngo-Ephreli 2, 2015, kubuyiswe ama-9.2% futhi kwavakasha kuphela u-4.02% ngo-Ephreli 3, 2015. Ungahlola into efanayo ngomugqa wesine ukuthola ukuthi zingaki izivakashi eziyingqayizivele eziyi-160 ezivakashele iwebhusayithi yakho ngo-Ephreli 3, Ephreli 4, Ephreli 5th , njalo njalo.
Isilinganiso sezinsuku eziyisikhombisa ezinezivakashi eziyi-1,124 sezingabonakala emgqeni wokuqala, omelwe kwigrafu ephezulu.
Kuze kube manje, ngikubonile lokhu kuhlaziywa kwenziwa kumawebhusayithi amaningi. Ngiphethe ngokuthi amawebhusayithi angenzi kahle emazingeni ezinjini zokusesha noma kunoma yisiphi esinye isiteshi esikhethekile sokwenza ithrafikhi nawo anezinga eliphansi kakhulu lokugcinwa. Amawebhusayithi ayigugu lomkhiqizo futhi adonsela kuthrafikhi engaguquki aziqhayisa ngamazinga aphezulu okugcinwa. Kuyithemba lami ukuthi manje usungahlaziya izinga lokugcinwa kwewebhusayithi yakho. Kepha, umbuzo olandelayo ukuthi ngabe lokhu kusetshenziswa kungasetshenziswa kuphi? Impendulo ukuthi isetshenziselwa kangcono ukuhlaziya amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zeselula.
Ukuhlaziywa Kweqoqo Ekusebenziseni Kwamaselula
Ngenxa yokuthi inani eliphezulu labantu manje lisebenzisa i-smartphone noma ithebhulethi yabo ukusesha i-Intanethi, izinhlelo zokusebenza zeselula ziyachuma kulezi zinsuku. Lokho kwenza ukuhlaziya ukusebenza komsebenzisi kwezicelo zeselula kubaluleke kakhulu ukuqhubeka nokukhula. Uma uzibuza ukuthi abasebenzisi basebenzisana isikhathi esingakanani nohlelo lwakho lokusebenza lweselula, ukuthi abasebenzisi baluvula kangaki uhlelo lokusebenza ngosuku, noma ukuthi uhlelo lokusebenza luzibandakanya kanjani, ungazithola zonke izimpendulo zakho ngokwenza ukuhlaziywa. Ngemuva kwalokho, uzoba nolwazi lokwenza ukuthuthukiswa kwamasu asemqoka athuthukisa ubukhona benkampani yakho.
Ngokunjalo, noma nini lapho wenza izibuyekezo kuhlelo lwakho lokusebenza lweselula, uzokwazi ukubona ngokubonakalayo imiphumela yokuthuthuka. Uma isilinganiso sakho sokugcinwa kwehla, kukhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi uphuthelwe okuthile futhi abasebenzisi abayithandi imiphumela yokugcina. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa ukuqonda kwakho ekuziphatheni komsebenzisi ukwenza ukubuyekeza okulandelayo kube ngcono kakhulu. Noma yiluphi ushintsho ekuziphatheni komsebenzisi wohlelo lokusebenza lweselula lungalandelwa kalula futhi luncishiswe ukunikela ngemizamo yakho elandelayo ekubandakanyeni okuningi.
Ngezansi kunesibonelo sokuhlaziywa kweqoqo okwenziwa ohlelweni lokusebenza lweselula olunabasebenzisi beviki abangu-8,908. Njengoba ukwazi ukubona, isilinganiso sokugcina sasingu-32.35% ngosuku 1, esinciphisa usuku nosuku. Ngale datha, kufanele uqale ukugxila kokuthi ungagcina kanjani abasebenzisi bahlanganyela nohlelo ukuze izinga lokugcinwa likhuphuke nabasebenzisi abaningi abavula uhlelo lokusebenza nsuku zonke. Uma isikhuphukile, kuzoba noshintsho oluphakeme lokuthola izivakashi ezintsha ngenxa ye- ukukhangisa ngomlomo.
Ilungiselela Umbiko Wokuhlaziywa Kwamaqoqo
Lapho uvula i-Google Analytics ukwenza ukuhlaziywa kwakho, uzothola ukuthi umbiko ungalungiswa ngokususelwa ohlotsheni lweqoqo, usayizi weqoqo, imethrikhi nebanga ledethi.
Uhlobo Lweqoqo - Okwamanje, inguqulo ye-beta ikuvumela ukufinyelela usuku lokutholwa, ngakho-ke ungabona indlela yokuziphatha kwabasebenzisi abavakashele isayithi ngosuku oluthile nokuthi baziphathe kanjani isikhathi esithile.
Usayizi Weqoqo - Lokhu kusho ushintsho ngosayizi wamaqoqo ngamahora, amasonto, noma izinyanga. Ukulungiselela umbiko wakho ngokususelwa kusayizi weqoqo kungakusiza ukuthi uthole ukuthi zingaki izivakashi ezivakashelwe ngoJanuwari futhi zabuya ngenyanga kaFebhuwari. Lapho ukhetha usayizi weqoqo, ungakhetha ibanga ledethi lezinsuku eziyisikhombisa, 14, 21, noma ezingama-30 ngenkathi ukhetha usayizi wamasonto.
I-Metric - Lokhu kumane kuyinto eyodwa ofuna ukuyikala. Ngalesi sikhathi, amamethrikhi angafaka ukuguqulwa ngomsebenzisi ngamunye, ukubukwa kwekhasi ngesivakashi ngasinye, amaseshini ngesivakashi ngasinye, ukubukwa kohlelo lokusebenza ngekhasimende ngalinye, ukugcinwa komsebenzisi, ukuqedwa kwegoli, ukuguqulwa, njll. Konke kungasebenziseka lapho kunqunywa impumelelo yesilinganiso sakho sokugcinwa.
Usuku Range - Ngalokhu, ungahluka ibanga ledethi ngezinsuku, amasonto, nezinyanga ngokuya ngosayizi weqembu lakho.
Kungenzeka futhi ukuthi usebenzise ukuhlaziywa ezigabeni ezahlukahlukene. Isibonelo, ungabheka isikhathi esimaphakathi sesikhathi sezivakashi ezikumakhalekhukhwini uma kuqhathaniswa nezivakashi ezisebenzisa ikhompyutha yedeskithophu. Noma, ungahlela lo mbiko ngokuya ngokutholwa kwezivakashi ezintsha phakathi nesonto elithile, njengeviki elandulela uKhisimusi 2014. Ukwenza lokhu kungakhombisa ukuthi izivakashi zewebhusayithi yakho zichitha isikhathi esiningi kusayithi zisebenzisa ikhompyutha yedeskithophu, ikakhulukazi ngaphambi kukaKhisimusi.
Ungadangali uma ukuhlaziywa kweqembu kunzima kakhulu ukuliqonda okokuqala ngoba uzoqhubeka nesikhathi. Kuyisici esiwusizo kakhulu esivumela ukuthi uhlaziye impendulo ebambezelekile yabasebenzisi ngqo ngethuluzi lakho le-Google Analytics. Ukwehlisa le datha eyiqiniso kungakusiza wenze ukuthuthuka okusha kokubandakanya kuwebhusayithi yakho kanye / noma kuhlelo lokusebenza lweselula ukuze uthole ukuguqulwa okungcono.
Tags: Ama-Analyticsiqembuukuhlaziywa kweqembuI-google analyticsUkuhlaziywa kweqoqo le-google analyticskuyini ukuhlaziywa kweqembu
May 15, 2015 ku-5: 58 AM
Isibonelo osibonisile kulokhu sohlelo lokusebenza lweselula. Yiluphi uhlelo lokusebenza?
Jul 23, 2015 ku-4: 49 AM
Ngibonga kakhulu uShane ngesikhathi sakho sokusichazela ngokuHlola kwamaqoqo. Kwakufundwa kahle impela! Sithole ama-imeyili ambalwa abuza ngale Cohort kepha manje sesingabanika isixhumanisi sakho 😉
May 13, 2016 ku-1: 18 AM